Welthungerhilfe: Siyaasadda Arrimaha Shakhsiyeed – Welthungerhilfe
Annagoo ah, Deutsche Welthungerhilfe e. V., waxaan u qaadanaynaa ilaalinta xogtaaga shaqsi si dhab ah. Waxaan ula dhaqannaa xogtaaga shaqsiyeed si qarsoodi ah iyo, sida dabiiciga ah, iyada oo la raacayo qawaaniinta ilaalinta xogta ee sharciga ah iyo nidaamkan Siyaasadda Asturnaanta.
Mabda 'ahaan, waa suurtogal in la isticmaalo websaydka annaga oo aan bixin xog shakhsiyeed. Sidoo kale sida xog shaqsiyeed oo kasta (sida magaca, cinwaanka, ama cinwaanka e-maylka) ayaa laga soo aruuriyaa websaydhkeena, tani waxay ku dhacdaa si iskaa ah gabi ahaan. Xogtaas lama wadaagi doono cid saddexaad iyadoon oggolaanshahaaga la haysan.
Fadlan la soco in wareejinta xogta onlaynka ah (tusaale ahaan, marka la eego ku wada xidhiidhka isgaadhsiinta e-maylku) ay u nugul tahay ciladaha amniga. Suurtagal ma aha in si buuxda looga xafido xogta helitaanka dhinac saddexaad.
Xogtan laguma xidhiidhin karo shaqsiyaadka mana lagu dari doono ilo kale oo xog ah.
Cidda mas'uulka ka ah iyo macluumaadka lagala xidhiidhayo:
Siyaasadda Asturnaanta wuxuu xukumaa shaqo ka qabashada xogta:
1. Warbixin Guud
Siyaasadda Asturnaanta, waxaan ku sharraxnaa nooca, baaxadda, iyo ujeeddada shaqo ka qabashada xogta shaqsiyeed ee adeegyada onlaynka ah ee 'Deutsche Welthungerhilfe e'. V. iyo websaydadeeda la xidhiidha, howlaha, iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin (halkan ka bacdi waxa lagu magacaabi doonaa “Websayd”). Siyaasadda Asturnaanta wuxuu quseeyaa iyadoon loo eegin dhoomeynada shaqsiyadeed, nidaamyada, baraha bandhiga, iyo aaladaha (tusaale ahaan desktop-ka ama aaladaha mobilada) ee adeegyadeena internetka laga helo.
Cidda masuuliyadda leh
Fakis: +49 (0)228-2288 250
Shuruudaha sida "xogta shaqsiyeed" ama "shaqo ka qabashada" isku mid ah waxaa lagu qeexaa sida uu dhigayo § 4 ee Sharciga Ilaalinta Xogta Guud (GDPR). Waa suurta gal in loo adeegsado Websaydka - marka laga reebo waxyaabaha la xidhiidha ee bulshada — ujeeddooyin macluumaad ah iyadoo aan la bixinin xog shaqsiyeed (eeg §§ 9, 10, 12).
Waxaan uga hawlgalinaa xogta shaqaalaheena keliya iyadoo la raacayo qawaaniinta ilaalinta xogta ee la xidhiidha; tan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn kiisaska looga baahan yahay shaqo ka qabashada xogta si loogu bixiyo adeegyadeena onlaynka ah, adeegsadaha ayaa oggolaaday, ama danahayaga sharciga ah ayaanu ka aragnay (sida, danaha falanqaynta, kobcinta, iyo hawlgallada ganacsi iyo amniga adeegyadayada internetka sida uu dhigayo § 6.1(f) GDPR - gaar ahaan cabbiraadda gaadhista, abuuritaanka “shakhsiyaadka” ujeeddooyinka dadweynaha iyo suuqgeynta, qabashada xogta marin u helka, iyo ka faa'iideysiga adeeg bixiyayaasha ee dhinaca saddexaad).
Xaaladdan guud, ereyga “adeegsade” wuxuu ka kooban yahay dhammaan qeybaha dadka ay saameeyeen shaqo ka qabashada xogta; tan waxaa ku jira deeq-bixiyeyaashayada, shuraakada iskaashi, dhinacyada danaynaya, iyo kuwa kale ee booqanaya adeegyadeena internetka. Erayada loo adeegsaday, tusaale ahaan “adeegsade”, waa dhexdhexaad jinsi.
Fadlan la soco in aasaaska sharciga ah ee oggolaanshaha sida ku xusan §§ 6.1 (a), 7 GDPR ay saldhig u tahay aasaasidda sharciga ah ee shaqo ka qabashada xogta shaqsiyadeed ee labadaba ujeeddooyinkayaga fulinta waajibaadkayaga sharciyeed (§ 6.1 (c) GDPR) iyo ujeeddooyinkayaga ilaalinta danaha gaarka ah ee sharciga ah (§ 6.1 (f) GDPR).
Haddaad rabto inaad ku tabarucdo, waxaan ku weydiin doonaa magacaaga iyo macluumaad dheeraad ah oo shaqsiyeed oo la xidhiidha deeqda. Xogtaaga waxaa la noo soo diraa annaga oo isticmaalayna xidhiidh qarsoodi ah oo SSL ah waxaana lagu keydiyaa serferada sida gaarka ah loo ilaaliyo ee Jarmalka. Waxaa marin looga heli karaa dad tiro yar oo leh caddeyn khaas ah oo ku lug leh taageerada farsamo ama ganacsi ee serferadan. Kaliya xisaab xogtaada ah lalama wadaagi doono dhinacyada sadexaad oggolaashahaaga la'aantiis.
Fadlan la soco in wareejinta xogta onlaynka ah (tusaale ahaan, marka la eego ku wada xidhiidhka isgaadhsiinta e-maylku) ay u nugul tahay ciladaha amniga. Suurtagal ma aha in si buuxda looga xafido xogta helitaanka dhinac saddexaad. Xogta gaarka ah markaa waa in lagu gudbiyaa oo keliya khadka isku xidhka (SSL).
2. Tallaabooyinka Amniga
Waxaan qaadnaa tallaabooyin casri ah oo urur, qandaraas, iyo amniga farsamada si aan u hubinno u hoggaansanaanta qawaaniinta sharciyada ilaalinta xogta iyo in aan ka ilaalinno xogta aan hawsha ka wadno khalkhalgelinta aan tooska ahayn ama bartilmaameedsan, lumista, burburka, ama marin u helka shaqsiyaadka aan loo oggolayn.
Tallaabooyinka amniga ee la sheegay waxa kujira laakiin aan ku xaddidneyn gudbinta qarsoon ee xogta ee u dhaxeysa barawsarkaaga iyo serferkayaga.
3. La Wadaagidda Xogtaada Dhinacyada Saddexaad iyo Bixiyeyaasha Qeybta Saddexaad
Haddii aanu shaqaaleyno cid kasta oo adeeg bixisa oo dibedda ah si ay u bixiso adeegyadeena, tan waxaa loo sameeyaa iyadoo la raacayo qawaaniinta § 28 GDPR. Waxaan ku dhamaynay heshiis shaqo ka qabasho xadidan shirkad kasta oo xogta shaqo ka qabanaysa si aan u hubinno in xogtaaga shaqsiyadeed loo farsameeyo si waafaqsan ujeedadooda oo aan la wadaagin. Waxaan sidoo kale qaadnaa tallaabooyin farsamo iyo abaabul oo ku habboon si aan u ilaalinno xogtaada shaqsiyeed.
Tani waxay khusaysaa bixiyeyaasha adeegga oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn kuwa soo socda:
i-gelb GmbH, Bruesseler Str. 89-93, 50672 Cologne: Dayactirka websaydka iyo horumarintiisa
micropayment GmbH, Scharnweberstrasse 69, 12587 Berlin: lacag bixinta internetka ee deeqaha ah
Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin: Bixiyaha adeegga dirista ee diritaanka jaraa'idka (eeg § 12)
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: Falanqaynta websaydka iyo dib u suuqgeynta (eeg §§ 8, 9)
Falcon.io ApS, H.C. Andersens Boulevard 27, 1., 1553 Copenhagen V, Danmark - Softiweer loogu talagalay isgaadhsiinta warbaahinta bulshada iyo falanqaynta
Maaddaama waxyaabaha ku jira, qalabka, ama agabyada kale loo adeegsado qaab dhismeedka Siyaasadda Asturnaanta ee bixiyeyaasha kale (halkan si wada jir ah loogu yeedho “Bixiyeyaasha Dhinaca Saddexaad”) ee ka diiwaangashan waddanka saddexaad, waa in loo qaataa in xogta loo gudbiyo diiwaanka waddanka Bixiyaha Dhinaca Saddexaad. Wadamada saddexaad waa wadamo ay GDPR aysan si toos ah u khusaynin sharci ahaan - tan guud ahaan waxaa ka mid ah wadamada ka baxsan Midowga Yurub iyo Aagga Dhaqaalaha Yurub. Xogta waxaa loo gudbin karaa waddamada saddexaad iyadoo ay jirto heerka ku habboon ilaalinta xogta, oggolaanshaha isticmaalaha ama qaab kale oo sharciyeyn ah.
4. Xidhiidh Samaynta adigoo Isticmaalaya Foomka Xidhiidhka
Websaydkayaga ayaa ku siinaya ikhtiyaarro badan oo aad noogu soo dirto su’aalahaaga annaga oo adeegsannayna foomka xidhiidhka oo la dhex marinayo khad SSL la qariyay. Iyada oo la raacayo § 6.1 (a) GDPR, si gaar ah xogta iyo macluumaadka loo baahan yahay si shaqo looga qabto waydiintaada ayaa looga hawlgali doonaa.
Haddii aad uga tagto faallooyinka meelaha ay khusayso ee Websaydkayaga, cinwaankaaga IP-ga waxaa lagu keydin doonaa muddo toddobo maalmood ah iyadoo lagu saleynayo danaha sharciga ah ee ku saleysan macnaha qodobka § 6.1 (f) GDPR. Nidaamkan keydinta ayaa loogu talagalay nabadgelyadeena. Haddii qof ku qoro macluumaad sharci darro ah faallooyinka dhexdooda sida (aflagaadada, dacaayadaha siyaasadeed ee la diiday iwm.), waa laga saari doonaa annaga oo qiimaynayna aqoonsiga qoraaga.
6. Helitaanka Xogta iyo Diiwaanada Macluumaadka
Iyada oo ku saleysan danahayaga sharciga ah ee ku saleysan macnaha xeerka § 6.1 (f) GDPR, waxaan ururinaa xog mar kasta oo serfarka martigeliya adeegan (Serverlogfile) la galo. Xogta gelitaanka waxaa ka mid ah laakiin kuma eka:
Cinwaanka IP-ga ee kumbiyuutarka diraya dalabka
Magaca iyo URL-ka bogga la galay
Qaddarka xogta la diray intii la gudbinayay bogga
Xaaladda marinka (bogga waa la faafiyay, bogga aan la helin iwm.)
Barawsarka iyo xogta obareytin sistamka
Websaydku waa barta galitaanka
Sababo amni awgood (tusaale ahaan, si loo xalliyo kiisaska xadgudubka ama khayaanada), macluumaadka diiwaanka ayaa la keydin doonaa ugu badnaan toddobo maalmood ka dibna waa la tirtiri doonaa. Xogta ay tahay in loo xafido ujeedooyinka caddeyn lama tirtiro illaa dhacdada la xidhiira si buuxda loo xalliyo.
7. Kuukiyada iyo Cabbirka Gaadhidda
Kuukiyada waa xogta laga gudbiyo serferrka shabakaddayada ama ka timaad serferada shabakadda dhinaca saddexaad ee taga barawsarka websaydka adeegsadaha halkaasna loogu keydiyo si mustaqbalka loo soo celin karo. Kuukiyada waxay lahaan karaan qaab faylal yaryar ama qaabab kale oo keydin macluumaad ah. Iyada oo la raacayo Siyaasadda Asturnaanta, waxaa lagugu ogeysiin doonaa wixii kuukiyaal ah oo loo adeegsaday cabbiraadda gaaarnaanta aan qarsoodiga lahayn.
Haddii aadan dooneynin wax kuukiyo ah in lagu keydiyo kumbuyuutarkaaga, waxaa lagaa codsanayaa inaad iska saarto ikhtiyaarka u dhigma sidaas ee nidaamka barawsarkaaga. Kuukiyada la kaydiyo waa laga nadiifin karaa nidaamka barawsarka. Iska saaridda kuukiyada ayaa xaddidi kara waxqabadka Websaydka.
Waxa kale oo aad ka bixi kartaa isticmaalka kuukiyada marka la eego gaadhista cabbirka iyo ujeeddooyin suuq-geyn ah iyada oo loo marayo bogga daminta ee Mashruuca Shabakadda Xayaysiinta (http://optout.networkadvertising.org/) iyo websaydka Mareykanka (http://www.aboutads.info/choices) ama websaydka Yurub (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
8. Isticmaalka Google Analytics
Iyada oo ku saleysan danahayaga sharciga ah (sida, danaha falanqaynta iyo kobcinta gudaha ee macnaha xeerka § 6.1 (f) GDPR), waxaan adeegsanaa Google Analytics, oo ah adeeg falanqeyn shabakadeed oo ay bixiso shirkadda Google Inc. (“Google”).
Google Analytics ayaa adeegsada kuukiyo (eeg § 7) si loo fududeeyo falanqaynta isticmaalka websaydkaaga. Xogtaada isticmaalaha ee Websaydka waxa soosaara kuukiyada ka dibna guud ahaan waxaa loo gudbiyaa serferka Google oo ku yaal Mareykanka halkaas ayaana lagu keydiyaa. Google waxaa sharciyeeyay Privacy Shield Framework, oo dammaanad qaadaya u hoggaansanaanta qawaaniinta ilaalinta xogta ee Yurub (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=active).
Google wuxuu u isticmaali doonaa xogtan iyadoo la raacayo tilmaamahayaga si loo qiimeeyo sida loo isticmaalo adeegyadayada internetka, si loo ururiyo warbixinnada ku saabsan howlaha ka dhex dhaca adeegyada onlaynka, iyo inuu fuliyo adeegyo dheeraad ah oo la xidhiidha adeegsiga adeegyadan onlaynka iyo internetka. Bogagga adeegsadaha aan la aqoonsan ayaa laga soo saari karaa xogta laga shaqeeyey.
Waxaan u isticmaalnaa Google Analytics si aan u tusno xayeysiinta iyada oo loo marayo adeegyada xayeysiinta ee Google iyo la-hawlgalayaasheeda kaliya sida isticmaalayaasha muujiyey xiisaha ay u qabaan adeegyadeena onlaynka ah ama leh astaamo gaar ah (tusaale, xiisaha mowduucyada qaarkood ama alaabada, oo la go’aamiyo iyadoo la adeegsanayo bogagga internetka la booqday.) oo aan la wadaagno Google (oo loogu yeedho “Remarketing Audiences” ama “Google Analytics Audiences”;). Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan isticmaalno Remarketing Audiences si aan u hubinno in xayeysiintayada ay u dhigmaan danaha suurtagalka ah ee isticmaalayaasha oo ayna u noqon wax la dhibsado.
Fadlan la soco in lambarka "anonymizeIp" lagu daray Google Analytics ee Websaydka si loo hubiyo ururinta qarsoon ee xogta IP (keydinta IP). Tani waxay ka dhigan tahay in Google ay gaabinayso cinwaannada IP-ga ee isticmaalayaasha gudaha dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub ama waddammada kale ee heshiiska kula jira ee ka socda Aagga Dhaqaalaha Yurub. Kaliya kiisas gaar ah ayaa cinwaanka IP-ga oo buuxa loo gudbin doonaa serferka Google oo ku yaal Mareykanka halkaasna waa lagu soo gaabin doonaa. Cinwaanka IP-ga ee uu faafiyay barawsarka isticmaalaha laguma dari doono xogta kale ee Google haysato. Waad ka hortagi kartaa kuukiyada in lagu keydiyo meel u dhigma barnaamijka barawsarkaaga; si kastaba ha noqotee, fadlan la soco in tani ay kaa horjoogsan karto inaad isticmaasho mid kasta oo ka mid ah howlaha Websaydka si buuxda.
Intaas waxaa sii dheer, waad ka horjoogsan kartaa Google soo aruurinta iyo shaqo ka qabashada xogta uu kuukiya ka soo saaray adeegsigaaga adeegyadayada onlaynka ah adigoo ka soo dejinaya isla markaana ku rakibaya balag-inka barawsarka oo aad ka heli karto xidhiidhiyaha soo socda:
Waad ka hortagi kartaa Google Analytics in ay qabato xogta adoo gujinaya xidhiidhiyaha soo socota. Tani waxay meelayn doontaa ka bixitaanka kuukiyada si looga hortago in xogtaada la qabto inta aad ku guda jirto booqashooyinka mustaqbalka ee websaydkan: Iska Xidh Google Analytics
Xusuusnow inaad cusboonaysiiso ka bixitaankan kuukiyada haddii aad tirtirto tan ama dhammaan kuukiyada iyada oo loo marayo aasaaska barawsarkaaga.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo la xidhiidha isticmaalka xogta ee Google iyo sidoo kale ikhtiyaarada aasaaska iyo ka bixitaanka bogagga Google ee soo socda: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB (“Sida Google u adeegsato macluumaadka ka socda boggaga ama barnaamijyada adeegsada adeegyadeena”), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB (“Xayeysiin”), http://www.google.de/settings/ads (Xakamee macluumaadka Google u adeegsado inuu ku tuso xayeysiiska;).
9. Dib-u-suuqgeynta Google
Iyada oo ku saleysan danahayaga sharciga ah (sida, danaha falanqaynta iyo kobcinta gudaha macnaha § 6.1 (f) GDPR), waxaan adeegsannaa adeegyada suuqgeynta iyo dib-u-suuqgeynta (Adeegyada Suuqgeynta Google) ee Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google waxaa sharciyeeyay Privacy Shield Framework, oo dammaanad qaadaysa u hoggaansanaanta qawaaniinta ilaalinta xogta ee Yurub https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Adeegyada Suuqgeynta Google waxay noo oggolaaneysaa inaan si wanaagsan u bartilmaameedsano xayeysiiskayaga onlaynka ah ee shabakadeenna si aan u tusno isticmaalayaasha kaliya xayeysiisyo u dhigmi kara danahooda. Markii isticmaale, tusaale ahaan, la tuso xayeysiiska alaabada uu ka soo daawaday websatyada kale, tan waxaa loo yaqaanaa dib-u-suuqgeyn. Ujeeddooyinkan awgeed, koodh Google ayuu isla markiiba fulinaya Google markii websayd kaas oo Adeegga Suuqgeynta Google uu shaqeynayo la booqdo, iyo calaamadaha dib-u-suuqgeynta — garaafikyo ama lambar aan la arki karin oo loo yaqaan “web beacons”— ayaa websaydka lagu dhejinayaa. Isticmaalka calaamadaha dib-u-suuqgeynta ee la sheegay, kuukiyo gaar ah, sida, fayl yar, ayaa lagu keydiyaa aaladda isticmaalaha (teknolojiyad u dhiganta ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa halkii kuukiyada). Faylkani wuxuu qoraa websaydada isticmaalayaashu booqdeen, tusmada uu arkay, iyo meesha uu riixay; waxay sidoo kale diiwaan gelisaa macluumaadka farsamada ee la xiriira barawsarka iyo obareytin sistam, tixraaca websaydyada, waqtiga booqashada, iyo xogta kale ee la xiriirta adeegsiga adeegyada internetka.
Cinwaanka IP-ga isticmaalaha sidoo kale waa la qabtaa; marka loo eego Google Analytics, cinwaanka IP-ga waxaa lagu soo gaabin karaa gudaha wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ama wadamada kale ee heshiiska la gala ee ka mid ah Aagga Dhaqaalaha Yurub iyo keliya kiisaska gaarka ah ee loo gudbiyo serferka Google oo ku yaal Mareykanka oo lagu gaabiyo halkaas. Cinwaanka IP-gu kuma xirna xogta isticmaale ee adeegyada kale ee Google. Macluumaadka kore waxaa sidoo kale lagu dari karaa Google iyo macluumaad la mid ah oo ka yimid ilo kale. Haddii isticmaalaha uu haddana booqdo websayddo kale, waxaa laga yaabaa in lagu tuso xayeysiis ku wajahan danahiisa.
Adeegyada Suuqgeynta Google ayaa u adeegsada xogta isticmaale si qarsoodi ah. Tani waxay ka dhigan tahay in Google uusan keydinaynin oo uusan shaqo ka qaban xogta sida magacyada ama cinwaanada emaylka isticmaalayaasha laakiin ay shaqo ka qaban doonaan xog la xiriirta kuukiyada ku dhaca astaamaha isticmaalayaasha aan la garanaynin. Marka loo eego aragtida Google, xayeysiiska looma maamulo loomana muujiyo iyada oo loo tixraacayo qof si gaarkiisa laakiin taa beddelkeeda tixraaca qofka haysta kuukiya iyadoon loo eegayn aqoonsiga qofka haysta. Tani ma quseyso hadii isticmaale si cad u oggol yahay Google inuu xogtiisa ku adeegsado nidaamkan aqoonsi-tirista. Xogta ay qabteen Adeegyada Suuqgeynta Google ee ku saabsan isticmaalaha waxaa loo gudbiyaa Google waxaana lagu keydiyaa serferada Google ee Mareykanka.
Waxaan sidoo kale adeegsannaa adeegga Google Optimize Websaydkeena. Google Optimize wuxuu noo oggolaanayaa inaan u isticmaalno waxa loogu yeero tijaabooyinka A/B si aan dib ugu dhisno sida isbeddelada kala duwan ay saameyn ugu yeelan karaan websayd (tusaale ahaan, isbeddelada meelaha wax laga beddelo, isbeddelada naqshada iwm.). Kuukiyada ayaa loogu keydiyaa qalabkaaga ujeedooyinkan. Dhammaan xogta shaqada lagaga qabtay macnahan guud waa bilaa aqoonsi. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u isticmaalnaa Google Tag Manager si aan ugu darno falanqaynta Google iyo adeegyada suuqgeynta Websaydkeena oo aan si la mid ah u maamulno.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan u adeegsiga xogta ujeeddooyinka suuqgeynta ee Google waxaa laga heli karaa bogga dulmarka guud ee soo socda: https://www.google.com/policies/technologies/ads; waxaad ka heli kartaa siyaasada gaarka ah ee Google halkan https://www.google.com/policies/privacy.
Haddaad jeceshahay inaad ka baxdid xayeysiiska bartilmaameedka ah ee Adeegyada Suuqgeynta Google, waxaad isticmaali kartaa aaasaaska Google iyo ikhtiyaarka ka-bixida: http://www.google.com/ads/preferences.
10. Facebook, Custom Audiences, iyo Adeegyada Suuqgeynta Facebook
Iyada oo ku saleysan iyo ujeeddooyinka danahayaga sharciga ah ee falanqaynta, kobcinta, iyo hawlgallada ganacsi ee ku saabsan adeegyadeena internetka, adeegyada la sheegay waxay adeegsadaan Facebook Pixel, oo ah aaladda shabakadda bulshada ee Facebook, oo ay maamusho Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ama, haddii aad ku nooshahay EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Facebook waxaa sharciyeeyay Privacy Shield Framework, oo dammaanad qaadaysa u hoggaansanaanta qawaaniinta ilaalinta xogta ee Yurub https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Isagoo adeegsanaya Facebook Pixel, Facebook waxay ku kooxayn kartaa booqdayaasha adeegyadeena internetka inay yihiin koox bartilmaameed ee xayeysiinta (“Facebook Ads”). Sidaa darteed, waxaan u isticmaalnaa Facebook Pixel si aan u tusno Xayeysiiska Facebook ee isticmaalayaasha Facebook ee keliya muujiyey inay daneynayaan adeegyadeena internetka ama leeyihiin astaamo gaar ah (tusaale ahaan, xiiseyn mowduucyo gaar ah ama badeecad, oo lagu go’aamiyo isticmaalka websaydyada ay booqdeen) oo aan u gudbinno Facebook-ga (“Custom Audiences”).
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa Facebook Pixel si aan u hubinno in Xayeysiiska Facebook-gayaga uu la mid yahay danaha suurtagalka ah ee isticmaalayaasha oo aanu ahayn wax la dhibsado. Isticmaalka Facebook Pixel, waxaan sidoo kale la socon karnaa waxtarka Xayeysiinta Facebook ee ujeedooyinka tirakoobka iyo cilmi baarista suuqa annaga oo arkayna haddii isticmaalayaasha loo jiheeyo Websaydkeena iyagoo gujinaya Facebook Ad (“Conversion”).
Facebook Pixel wuxuu isla markiiba lagu dhafaa Facebook-ga markii Websaydkeena la adeegsanayo; waxay keydin kartaa kuukiya, sida, fayl yar, aaladdaada kujira. Haddii aad markii dambe gasho Facebook ama aad soo booqato Facebook inta aad gasho, booqashadaada adeegyadeena internetka waxaa lagu xusaa boggaaga. Xogta la aruuriyay ee adiga kugu saabsan annaga waa noo bilaa aqoonsi oo markaa nooma oggolaanayso inaan farogalino aqoonsiyada isticmaalayaasha. Si kastaba ha noqotee, xogta waxa keydiya oo shaqo ka qabta Facebook-ga, sidaa darteed ku xiriirinta qofka isticmaala bogga ayaa laga yaabaa in la sameeyo oo loo isticmaalo Facebook iyada oo ujeeddadeedu tahay cilmibaaristeeda suuqgeynta iyo xayeysiinta.
Haddii aan ula wadaagno xog Facebook ujeeddooyinka iswaafajin, waxaa lagu dhex qarin doonaa aaladda barawsarka ka hor inta aan Facebook loogu dirin khadka xidhiidhka sirta ah ee https. Tan waxaa loo sameeyaa oo keliya in la waafajiyo xogta isla Facebook ee si isku mid ah loo sameeyay.
Shaqo ka qabashada xogta Facebook-ga waxay ku xiran tahay siyaasadda asturnaanta ee Facebook. Macluumaadka guud ee la xidhiidha soo bandhigida Xayeysiiska Facebook waxaa laga heli karaa siyaasada asturnaanta ee Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Macluumaad gaar ah iyo faahfaahinta ku saabsan Facebook Pixel iyo sida ay u shaqeyso waxaa laga heli karaa qeybta caawinta Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Waad ka bixi kartaa qabashada xogta ee Facebook Pixel iyo adeegsiga xogtaada si ay u muujiyaan Xayeysiiska Facebook. Si loo go’aamiyo noocyada xayeysiiska ah ee laguugu soo bandhigi karo Facebook, waxaad furi kartaa bogga ku habboon ee Facebook waxaadna raacdaa tilmaamaha si aad ugu habayso aasaaska xayeysiinta kusaleysan isticmaalaha: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aasaaskan ayaa ah platform-independent, sida waxay isla mar ka wada shaqeeyaan dhammaan aaladaha sida kumbuyuutarrada desktop-ka ama aaladaha mobilada.
11. Warsidaha (meeshii ay khusayso )
Macluumaadka soo socdaa wuxuu sharaxayaa waxa ku qoran warsidaheena; rukumashada, dirista, iyo hanaanka qiimaynta ee tirakoobka; iyo xuquuqdaada ka laabashada. Haddii aad rukumato warsidahayaga, waxaad oggolaanaysaa inaad hesho isla nidaamka iyo nidaamyadii la sheegay.
Waxa ku Qoran Warsidaha: Waxaan u dirnaa warsidayaasha, emaylada, iyo farriimaha kale ee elektarooniga ah oo wata agab xayeysiis ah (Halkan kadib "Warside") oo ay kujirto oggolaanshaha qaataha oo khaas ah. Warsidaheena wuxuu ka kooban yahay macluumaad kusaabsan mashruucyadeena, ololaheena, dadaalada gargaarka degdega ah, ficilada, iyo ururkeena.
Laba Jeer Galid iyo Galitaanka: Rukumashada Warsidaheena waxaa lagu sameeyaa habka loo yaqaan laba jeer galid. Tan micnaheedu waa, markaad rukumato, waxaad heleysaa emayl ku weydiisanaya xaqiijinta rukumashadaada. Xaqiijintaani waa lama huraan si looga hor tago dadka in ay isku diiwaan geliyaan cinwaan e-mayl oo aan kooda ahayn. Rukumashada Warsidaha ayaa galitaan la sameeyaa si loo diiwaangeliyo nidaamka rukumashada iyadoo la raacayo shuruudaha sharciga u degsan. Tan waxaa ku jira keydinta waqtiyada rukumashada iyo xaqiijinta iyo sidoo kale cinwaanka IP-ga. Isbeddel kasta oo ku yimaadda xogtaada sida uu keydiyay bixiyaha adeegga dirista sidoo kale waa la diiwaangeliyaa.
Xogta Rukumashada: Si aad u rukumato warsideheenna, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad siiso cinwaanka emaylkaaga. Waxaad kaloo ikhtiyaar ahaan u bixin kartaa magac si aan shaqsi ahaan kuugu soo diri karno warsidaha.
Bixiyaha Adeegga Dirista: Si loo diro warsidaha, waxaan adeegsannaa adeeg bixiyaha Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, kaas oo waajib nagu ah inaan ilaalino sharciyada ilaalinta xogta oo hubineysa in xogtaada loo isticmaalo kaliya si laguugu soo diro Warsidaha WHH. Xogtaada si gaar ah ayaa loogu keydiyaa xarumaha xogta Yurub.
Waxaad ka daawan kartaa siyaasadda asturnaanta ee bixiyaha adeeg dirista halkan: https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/.
Daraasaadka Tirakoobka iyo Falanqaynta: Warsidayaasha waxaa ku qoran waxa loogu yeero "web beacon", sida, waa fayl cabirkiisu bigsal yahay oo dib loo soo helo markii laga furayo Warsidaha serferka bixiyaha adeegga dirista. Ujeeddooyinka dib ula soo bixiddan dartood, macluumaadka farsamada—sida barawsarka iyo macluumaadka nidaamka, cinwaankaaga IP-ga, iyo waqtiga dib ula soo bixidda—ayaa la soo uruurin doonaa. Macluumaadkan waxaa loo adeegsan doonaa hagaajinta farsameed ee adeegyada oo ku saleysan xogta farsamada, ee kooxaha bartilmaameedka ah iyo caadooyinkooda aqriska iyadoo lagu saleynayo meelaha ay ka galaan (lagu go'aamiyo iyada oo loo marayo cinwaanka IP-ga), ama waqtiyada galitaanka. Hababkeenna xog aruurinta waxaa sidoo kale ka mid ah go'aaminta bal in warsidaha la furay, goorta la furay, iyo xidhiidhiyayaasha la riixayo. In kasta oo macluumaadkan lala xiriirin karo dadka qaata Wargsidaha sababo farsamo awgeed, ama annaga ama bixiyaha adeegga dirista ma daneyno inaan la socono adeegsadayaasha shaqsiyeed; taa beddelkeeda, qiimeyntani waxay naga caawinayaan sidii aan u aqoonsan lahayn dhaqanka aqriska ee adeegsadaasheena si aan ula qabsan karno waxyaabaha aan u leenahay iyaga ama aan u kala qeybinno waxyaabo kala duwan isticmaalayaal kala duwan iyadoo ku xiran danaha shaqsiyadeed.
Ka Rukumasho Bax/Ka Bixitaan: Waad ka bixi kartaa rukummaadda—taas oo ah, la noqoshada oggolaanshahaaga helitaanka—Warsidaheena waqti kasta. Tani waxay joojin doontaa oggolaanshahaaga helitaanka wixii la mid ah iyada oo loo sii marayo bixiyaha adeegga dirista iyo falanqaynta tirakoobka. Nasiibdarro suurtagal maahan in si gooni ah loo joojiyo midkood bixiyaha adeegga dirista ama qiimaynta tirakoobka. Waxaad ka heli kartaa xidhiidhiye si aad uga baxdid rukumaadda Warsidaha dhammaadka Warside kasta. Haddii aad rukumatay Warsidaha oo markaa kadib aad joojiso rukumashada la sheegay, macluumaadkaaga shaqsiyadeed waa la tirtiri doonaa.
12. Sawirro, Fiidyawyo (Muuqaalo), ...
Sawirada iyo fiidyawyada (muuqaalada), ..., ee loo adeegsaday Websaydkan waxaa soo galiyey sawir qaadeyaal, wakaalado sawir qaadis oo heshiis lagula jiro, ama shakhsiyaadka la soo dhigay iyagoo leh oggolaanshahooda. Lahaanshaha iyo cidda leh sawirrada waxaa lagu bixiyaa ogeysiiska xuquuqda lahaanshaha ee ka hooseeya sawirka ama xogta sawirrada. Aasaaska sharci ee tani waa § 6.1 (f) GDPR.
13. Ku-darka Adeegyada Dhinacyada Saddexaad iyo Oggolaanshaha (halka ay ku habboon tahay)
Waxaan ku adeegsannaa waxyaabaha ku jira iyo adeegyada ee Bixiyeyaasha Dhinaca Saddexaad adeegyadeena onlaynka iyadoo ku saleysan danahayaga sharciga ah (sida, danaha falanqeynta, kobcinta, iyo howlaha ganacsiga ee adeegyadayada onlaynka ah iyadoo loo adeegsanayo macnaha § 6.1 (f) GDPR) si loogu daro waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo adeegyadooda sida fiidyawyada (halkan kadib si wada jir ah loogu yeero "Qormooyin"). Tani waxay had iyo jeer u baahan tahay Bixiyeyaasha Dhinaca Saddexaad ee Qormooyinkan si loo ogaado cinwaannada IP-ga ee isticmaalaha, maadaama aysan u soo diri karin Qormooyinka barawsarrada isticmaalaha iyadoo cinwaanka IP-gu jirin. Cinwaanka IP-ga ayaa sidaas darteed loo baahan yahay si loo muujiyo Qormooyinkan. Waxaan isku dayeynaa inaan u adeegsano oo keliya Qormooyinka Bixiyeyaasha noocan oo kale ah oo aan u adeegsanno cinwaanka IP-ga oo keliya si aan u gaarsiino Qormooyinka. Bixiyeyaasha Dhinaca Saddexaad sidoo kale waxay u adeegsan karaan calaamadaha bigsalka (qoraallo aan la arki karin ee sidoo kale loo yaqaan "web beacons") ujeedooyin tirakoob ama suuq geyn. Isticmaalka calaamadaha bigsalka, macluumaadka sida booqashada booqdaha ee bogagga ee bogagga la xiriira ayaa la qiimeyn karaa. Intaas waxaa sii dheer, macluumaadka aqoonsiga laga tiro waxaa lagu keydin karaa kuukiyada aaladda isticmaalayaasha waxaana laga yaabaa inay ku jiraan xog ay ku jiraan macluumaad farsamo oo ku saabsan barawsarka iyo obareytin sistamka, tixraacyada websaydyada, waqtiyada gelitaanka, iyo macluumaad dheeraad ah oo la xiriira adeegsiga adeegyadeena internetka; macluumaadka la sheegay ayaa sidoo kale lagu xiriirin karo macluumaadka kale oo ka yimid ilo kale.
Shaxda soo socota waxay bixinaysaa dulmar ee Bixiyeyaasha Dhinaca Saddexaad iyo Qormooyinkooda. Waxay sidoo kale bixisaa xidhiidhiyayaal ku aaddan siyaasaddooda asturnaanta oo ay ku jiraan macluumaad kale oo la xiriira shaqo ka qabashada xogta iyo ikhtiyaarada ka-bixista, oo qaarkoodna horayba loo sharaxay:
Haddii aad adeegsato adeegyada lacag-bixinta dhinac saddexaad (tusaale ahaan PayPal ama Sofortüberweisung, oo ah nidaam lacag-bixin internetka ah oo deggan Munich), xeerarka iyo shuruudaha iyo sidoo kale siyaasadaha asturnaanta ee Bixiyeyaasha Dhinaca Saddexaad ayaa quseeya; kuwani waxaa laga heli karaa bogagdooda ama codsiyada macaamil ganacsi.
Khariidadaha ayaa laga soo qaatay adeegga "Khariidadaha Google" ee bixiyaha dhinaca saddexaad Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Siyaasadda Asturnaanta: https://www.google.com/policies/privacy/, Ka bax: https://www.google.com/settings/ads/
Fiidyawyo ka socda dagalka "YouTube" ee bixiyaha dhinaca saddexaad Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Siyaasadda Asturnaanta: https://www.google.com/policies/privacy/, Ka bax: https://www.google.com/settings/ads/
Hawlaha uu bixiyo Twitter waxaa lagu dari karaa adeegyadeena internetka. Hawlaha la sheegay waxaa bixiya Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Adigoo adeegsanaya Twitter iyo shaqada "retweet", websaydyada aad booqato waxay ku xiran yihiin koontadaada Twitter oo waxaa lala wadaagaa isticmaalayaasha kale. Inta lagu gudajiro tan, xog ayaa sidoo kale loo gudbiyaa Twitter. Fadlan la soco in annaga oo ah bixiyaha Websaydka, aannaan qarinayn waxyaabaha ku jira xogta la gudbiyo iyo adeegsigeeda Twitter-ka. Siyaasadda asturnaanta ee Twitter waxaa laga heli karaa twitter.com/privacy. Waxad ka beddeli kartaa aasaaska ilaalinta xogtaada bogga Twitter-ka ee aasaaska koontadaada http://twitter.com/account/settings.
14. Xuquuqda Isticmaalayaashayada
Markii la codsado ee la xaqiijiyo, waxaan ku faraxsanahay inaan kugu wargalinno qoraal ahaan iyo iyadoo la raacayo qaanuunka khuseeya laguna haddii xogta shaqsiyeed ee ku saabsan naftaada laga shaqo laga qabto. Haddii ay sidaas tahay, waxaad xaq u leedahay shaac ka qaadista xogtan shaqsiyadeed iyo macluumaadka si faahfaahsan loogu taxay § 15 GDPR.
Haddii xogta quseeya nafsaddaadu khaldan yahay, waxaad xaq u leedahay inaad isla markiiba dalbato sixitaanka xogta shaqsiyeed ee khaldan ama dhammaystirka xogta shaqsiyeed ee aan dhammaystirneyn (§ 16 GDPR).
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato in xogta shaqsiyeed ee quseeya naftaada si dhaqso ah loo tirtiro hadba marka mid ka mid ah sababaha gaarka ah ee lagu taxay § 17 GDPR uu quseeyo, tusaale ahaan haddii xogta aan looga sii baahnayn hadafkooda loogu talagalay (xaquuqda masixidda).
Waxa kale oo aad xaq u leedahay inaad dalbato xaddidaadda shaqo ka qabashada haddii mid ka mid ah shuruudaha ku xusan § 18 GDPR uu khuseeyo; tusaale ahaan, haddii aad diidan tahay shaqo ka qabashada, tani waxay quseyneysaa muddada baaritaanka ee maamulaha.
Waxaad xaq u leedahay inaad u diido markasta in shaqo laga qabto xogta shaqsiyeed ee kusaabsan naftaada sababaha ka soo kordha xaaladaada gaarka ah. Shirkadeena ayaa markaa joojin doonta inay shaqo ka qabato xogta la sheegay ee shakhsiyadeed ilaa aan caddayn karno sababaha kalifay shaqo ka qabashada ama shaqo ka qabashadu ay u taagan tahay aasaasida, adeegsiga ama difaacida sheegashooyinka sharciga ah (§ 21 GDPR).
Adiga oo aan ku xumeynin wixii ah xal maamul ama garsoor, waxaad xaq u leedahay inaad cabasho u gudbiso hay'adda kormeerka haddii aad aamminsan tahay in shaqo ka qabashada xogta shakhsiyeed ee ku saabsan naftaada ay jebineyso GDPR (§ 77 GDPR). Waxaad ku isticmaali kartaa xuquuqdan adoo u maraya hay'adda kormeerida ee gobolka xubinta ka ah ee meesha aad deggan tahay, meesha aad ka shaqeysid, ama meeshii ay ku dhacday xadgudubka lagu eedeeyay. Waqooyiga Rhine – Westphalia, qofka soo socdaa wuxuu leeyahay awoodda sharci:
Sarkaalka ilaalinta xogta ee Waqooyiga Rhine – Westphalia (LDI)
15. Tirtirka Xogta
Xogta aan keydinay waa la tirtirayaa isla marka aan loogu baahnayn hadafkoodii loogu talagalay oo tirtiriddu kuma xadgudbayso muddooyinka haynta ee sharciga ah. Ilaa inta xogta isticmaalaha aan tirtirin sababta oo ah waxaa looga baahan yahay ujeedooyin kale oo sharci, shaqo ka qabashada wixii la mid ah waa la xaddidaa. Tan macnaheedu waa in xogta la kala sooco oo aan shaqo looga qaban ujeeddooyin kale. Tani waxay quseysaa, tusaale ahaan, xogta isticmaale ee u baahan in loo keydiyo ujeedooyin ganacsi ama canshuur.
Iyada oo la raacayo qawaaniinta dastuuriga ah, xogta sida waafaqsan § 257.1 HGB (Xeerka Ganacsiga Jarmalka) waa in la hayaa muddo lix sano ah (caddaymaha maaliyadeed ee sanadlaha ah, foojarada iwm.), iyo xogta sida waafaqsan § 147.1 AO (Xeerka Dakhliga Jarmalka) waa in la hayaa toban sano (buugaag, diiwaanno, warbixinno maamul, foojarro, dukumiintiyo la xiriira canshuuraha iwm.).
16. Xuquuqda Diidmada
Isticmaalayaashu waxay diidi karaan shaqo ka qabashada mustaqbalka ee xogtooda shaqsiyeed, oo ay kujirto shaqo uga qabashada ujeeddooyinka xayeysiinta tooska ah. Waxaan xushmeyneynaa xaquuqda aad u leedahay inaad diido hadii aan sharci ahaan aan ku qasbeynin inaan shaqo ka qabano xogta laga hadlayo.
17. Masuuliyada Xidhiidhiyayaasha
Waxaan si cad u cadaynaynaa in aysan wax Qormooyin sharci darrada ah kujirin bogagga ku xiran waqtiga la abuuray xidhiidhiyaha la sheegayo. Deutsche Welthungerhilfe e.V. wax saameyn ah kuma lahan qaabaynta hadda iyo mustaqbalka nashqadda, Qormooyinka, ama lahaanshaha bogagga ku xiran. Sidan oo kale haddaba, waxaan si cad iskaga fogaynaynaa dhammaan Qormooyinka bogagga ku xiran ee la beddelay ka dib markii la abuuray xidhiidhiyaha; tani waxay quseysaa dhammaan xidhiidhiyayaasha iyo tixraacyada ku jira adeegyadeena internetka. Kaliya bixiyaha bogga helaya diritaanka ee ma ahan cidda ugu soosooraysa tixraaca qaab xidhiidhiye ah daabacaada la sheegayo ayaa mas'uul ka ah Qormooyinka sharci darrada, khaladka, ama aan dhammaystirneyn iyo gaar ahaan waxyeelada ka dhasha adeegsiga ama isticmaalka macluumaadka la bixiyo.
18. Ogaysiis ku socda Waalidiinta iyo Ilaaliyayaasha Sharciga ah
Waalidka iyo ilaaliyayaasha sharciga ah ayaa mas'uul ka ah inay ilaaliyaan waxyaabaha u gaarka ah carruurtooda. Waxaan kaa codsaneynaa inaad carruurtaada kala hadashid sida loogu maamulo xogta shakhsiga ah ee onlaynka ah hab ammaan ah oo mas'uul ah.
19. Wax ka beddelidda Siyaasadda Asturnaanta
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddelno Siyaasadda Asturnaanta si aan u waafajinno isbeddelada sharciga, adeegyada, iyo shaqo ka qabashada xogta. Si kastaba ha noqotee, tani waxay khusaysaa oo keliya qodobada khuseeya shaqo ka qabashada xogta. Iyada oo loo baahan yahay oggolaanshaha isticmaalaha ama qeybaha Siyaasadda Asturnaanta ay ku jiraan qawaaniin la xiriirta heshiis lagula jiro isticmaalayaasha, wax ka beddelka la sheegayo waxaa lagu sameyn doonaa oo keliya oggolaanshaha isticmaalayaasha.
Waxaan had iyo jeer ku darnaa wax ka beddel Siyaasaddayada Asturnaanta halkaan waxaanuna kugula talineynaa inaad akhrido Siyaasaddan marmarka qaarkood.
20. Su'aalahaaga ama Faalladaada
Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad la xiriirto sarkaalkayaga ilaalinta xogta wixii su'aalo ah, talo soo jeedin ah ama cabasho ah oo ku saabsan Siyaasadda Asturnaanta. Waxaad kula soo xiriiri kartaa sarkaalka ilaalinta xogta adoo adeegsanaya emaylka ah datenschutz@welthungerhilfe.de ama boostada ku soo dir cinwaankayaga boostada oo ay ku jiraan "Ku sarkaalka ilaalinta xogta". Haddii aad jeceshahay inaad hesho macluumaadka ku saabsan xogtaada, beddesho ama tirtirto, fadlan la xiriir adeegga tabarucayaasha gaarka ah.>